Indawo Yokuphola Eyakhiwe Emthini - I-Airbnb
Indawo Yokuphola Eyakhiwe Emthini
Igumbi lakho lokulala e indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguJason
I-Treehouse Retreat isePhilomath, OKANYE - ngaphantsi kweekhilomitha ezi-5 ngasentshona yeYunivesithi yaseOregon State. Ungajonga ihlathi laseMcDonald, iBald Hill, kunye neMary's Peak kufutshane. Ukuhlala kwi-treehouse yeyona nto ikhethekileyo! Zibhale ngorhatya kwaye ukhuphe unxibelelwano kwihlabathi ledijithali kwaye uphinde uqhagamshelane nendalo. Zilungiselele inkampu yodidi kunye nendlu yangaphandle yokwenza umgquba. I-Treehouse Retreat ilungile kwizibini ezitshatileyo, abantu abahamba bodwa, kunye neentsapho ezincinci. Isenokungalungeli abantwana abancinci ngenxa yeeleli.
La ngamava awodwa enkampini kwi-100 square foot house house. Kukho izibane zombane kwisibali-xesha sokutshona kwelanga ukuya kuthi qheke ukusa kunye nesifudumezi sendawo ukuba kukho imfuneko, indawo yokufaka umgquba (nceda ukhumbule ukusebenzisa iinkuni zokucheba), indlu yeshawari eneshawari yangaphandle eshushu, idama lokuloba elisentwasahlobo elinevili lamanzi kunye neengxangxasi. , trampoline, ibala lokudlala, ukukhwela amagwababa kwindlwane, iintambo zojingi, iihoko zeenkukhu, kunye nezipline zokuzonwabisa. Amanzi okusela acocekileyo ayafumaneka kwi-sink yangaphandle ngakwindlu yeshawa ukuba ufuna ukuphinda ugcwalise ibhotile yamanzi, uhlambe izandla zakho, uxukuxe amazinyo, njl. njl. Yiza nokutya okupholileyo kunye nokutya okulula ukukonwabela, kunye nesibane okanye isibane ukuze ubonakale kakuhle busuku. Kukho i-loft yokulala ene-memory-foam umatrasi omangalisayo olungele ezimbini (sibonelela ngeelinen), kunye neebhedi ezi-2 ngezantsi ezineepadi zokulala kunye neengubo ezongezelelweyo kuzo naziphi na iindwendwe ezongezelelweyo ezifuna ukuzisa iingxowa zokulala, nangona ibhedi ephezulu yebhedi ingumntwana. -ubungakanani ngenxa yokunqongophala kwentloko. Kukho igazebo yomlilo egqunyiweyo (iinkuni ezithengiswayo kwiFama yethu yeSitendi), kodwa asinakuvumela imililo ukuba iimeko zomile kakhulu kwaye kunomoya. Nceda ubuze. Isenokungabalungeli abantwana abancinci ngenxa yeleli, idama, kunye nedekhi ezimtyibilizi xa zimanzi. Zilungiselele iimeko zemozulu ezibandayo ebusika, kwaye qaphela ishawari yangaphandle ayinakusebenza ukuba amaqondo obushushu ehla ngaphantsi komkhenkce. Nceda uqaphele ukuba i-treehouse isehlathini elikufutshane nendlu yethu, ke yindlela ekwabelwana ngayo kunye neeyadi ezi-2. Ifakwe kwihlathi lethu elincinane kumbindi wedolophu yasezidolophini. Siya kuba kufutshane ukuba kukho into oyifunayo, kodwa ubumfihlo bakho buza kuqala. Ixesha lokungena linini na emva kwentsimbi yesithathu, kwaye uphume nge-11am. Sinenja enobubele kakhulu egama linguMiley ezulazula simahla eyadini ukuze ikubulise kwaye ifune ingqalelo yakho. Sikwanazo namadada ahlala simahla anokuthi molo, ke ngethemba lokuba uya kuzonwabela izilwanyana njengenxalenye yotyelelo lwakho olumnandi. Nceda usebenzise umgaqo wekhefu-no-mkhondo wenkampu ukuze indawo ibuyele kubuhle bayo bendalo emva kokuba umkile.
4.81 out of 5 stars from 544 reviews
4.81 · Izimvo eziyi-544
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi544
Ipaki entsha yabahambi ngeenyawo eneendawo zokudlala zendalo kunye nenkundla yebhola yomnyazi emdeni wepropathi yethu. Iindawo zokutyela ezininzi ziphakathi kwesiqingatha semayile: Ukwenziwa kweNdlela emdaka, iDizzy Hen, iTimber Towne Coffee Shop, iEats & Treats BBQ, iVinwood Taphouse, iiDonuts zikaSissi, njl.
Siza kufumaneka ukuba unayo nayiphi na imibuzo. I-Treehouse Retreat isehlathini elisecaleni kwendlu yethu, ineyadi ekwabelwana ngayo kunye nendlela yokungena. Yayakhelwe abantwana bethu ekuqaleni, kodwa saqonda ukuba kwakumnandi kakhulu ukungabelani nabanye. Siya kukuhlonipha ngokupheleleyo ubumfihlo bakho njengoko yonke into ilungile, kodwa uzive ukhululekile ukubuza nayiphi na imibuzo ukuba ufuna ulwalathiso okanye izimvo. "Incwadi yesikhokelo" enemithetho yendlu, imiyalelo, kunye neengcebiso zinikezelwe kwi-treehouse.
Siza kufumaneka ukuba unayo nayiphi na imibuzo. I-Treehouse Retreat isehlathini elisecaleni kwendlu yethu, ineyadi ekwabelwana ngayo kunye nendlela yokungena. Yayakhelwe abantwana…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Philomath